Sameenta Filmka Sanju Iyo Sida Ranbir Munna Bhai Isaga Dhigay Inaba Caadi Ma Aha (+Video) – Filimside.net
Sameenta Filmka Sanju Iyo Sida Ranbir Munna Bhai Isaga Dhigay Inaba Caadi Ma Aha (+Video)
July 11, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: July 11, 2018
Ranbir Kapoor waxuu Hindiya sanadkaan ku qabsaday mashruucisa xiisaha leh ee Sanju kaaos uu oga hadlaayo nolosha halyeey Bollywood Sanjay Dutt waana film tiyaatarada ganacsi taariikhi ah ka sameenayo.
Wali waxaa socoto soo bandhigitaanka muuqaalada ugu dhibka badnaayen filmka Sanju qaabkii loo sameyay, maanta waxaa lasoo bandhigay sida Ranbir Kapoor Munna Bhai isaga dhigay.
Munna Bhai waa Sanjay Dutt doorkisa loogu jecelyahay filmadiisa lana daawaday sanadkii 2003 Raju Hirani ayaana Director ka ahaa, hadaba Ranbir iyo Hirani ayaa ka sheekenayaan muuqaal ahaana usoo bandhigeen sida Ranbir Munna Bhai u noqday.
Dhib badan ayee ka mareen ugu horeen muuqaal ahaan sidii Ranbir looga dhigi lahaa muuqaalka Sanjay ee Munna Bhai ayee dhowr jeer ku cel celiyeen ayagoo Make-up iyo waxyaabo kale isticmaalayaan, marar badan ayuu ka qaldamay muuqaalka oo markii ay shaashada tijaabo ka qaadaan sidii la rabay usan noqoneynin.
Kadib marka ay ku guuleesteen ugu dambeen inee muuqaalka keenan ayee hadana guda galeen sidii ficil ahaan ama jiliin ahaan uu Ranbir u sameen lahaa waxa Sanjay Munna Bhai kudhexsameyay taaso kaliftay in tiro xad dhaaf ah in Ranbir uu daawado filmka Munna Bhai labadiisa qeybood maadama uu wax badan ka saacidaayo xitaa kabo dhaa dheer ayee dalbana si joog ahaan uu u noqdo Sanju.
Ugu dambeyn socodka iyo hadalka ficil ahaan jiliinka marka uu keeno waxaa muuqaalkiisa la dhex galina filmka Munna Bhai ayadoo Computer la adeegsanayao, fadlan halkaan hoose ka daawo si aad oga bogato..
Waxaa Aqrisay 961
shaqo adag buu qabtay ranbir guul baan kuu rajeenaya
Sawirada Maanta: Weli Miyaad Aragtay Sawirada Ranveer Singh , Ananya Pandey, Kriti sanon,Aktaro Kale Oo Badan February 23, 2019
Filimka Uri ma hakanaayo Jimcadiisa todobaad bilaabasho taariikhi ah ayuu la yimid! February 23, 2019
Sheeko aad u xikmad badan oday iyo wiil uu dhalay February 23, 2019